चलेन कार्तिक र साराको ‘लव आज कल’ कति कमायो त दोश्रो दिन - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : आइत, फाल्गुन ४, २०७६
‘लव आज कल’को व्यापार रिलिजको दोश्रो दिनमा अनपेक्षितरुपमा घटेको छ । सारा अलि खान तथा कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म इम्तियाज अलि निर्देशित सिनेमाको व्यापार रिलिजको दोश्रो दिन शनिबार शुक्रबारको दाँजोमा ४० प्रतिशतले घटेको हो।
पहिलो दिन बिहीबार १२ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको चलचित्रले शुक्रबार ८ करोड एक लाखको व्यापार गरेको बलिउड व्यापार विश्लेषक तरण आदर्शले ट्वीट गरेर जानकारी दिएका छन्। यस ‍अघि इम्तियाज अलि निर्देशित ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ पनि समीक्षकीय तथा व्यापारिकरुपमा फ्लप भएको थियो।
यसैगरी ‘लव आज कल’ले पनि समीक्षकहरूबाट आलोचना पनि खेपेको छ। समीक्षकहरूले सोही नामको इम्तियाज अलि निर्देशित सन् २००९ को सिनेमासँग बराबरी गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
सुरुमै १२.४ करोड कमाएपछि सिनेमाले राम्रो व्यापार गर्ने आशा गरिएको थियो। बलिउड व्यापार विश्लेषकहरूले सिनेमा अब आफ्नो खस्केको व्यापरबाट माथि उक्लन नसक्ने दाबी गरेका छन्। ‘लव आज कल–२’ कार्तिक आर्यनको करियरको सबैभन्दा धरै ओपनिङ गर्ने चलचित्रसमेत बनेको छ।
साउथका विजयले लिए १ सय ३० करोड पारिश्रमिक !!
एक सातामा बाघी -३ को कमाइ कति !!
एकै दिन टाइगरको “बाघी ३” ले कमाई गर्यो….!! ५५ सय हलमा रिलिज
अनि यस कारण सेट मै रोईन मलाइका…
एकै विज्ञापनको ७ करोड लिन्छन सलमान !!